Akụkọ - mkpa nke ịnwụ nkedo anwụ imewe.
Mkpa nke ịnwụ nkedo anwụ imewe.
Nkedo anwụ bụ usoro maka ngwaahịa na akụrụngwa igwe na-emepụta oke. Nhazi ebu bụ otu n'ime usoro kachasị mkpa na usoro ahụ n'ihi na ọdịdị na àgwà nke ihe ọkpụkpụ ahụ ga-emetụta kpọmkwem ngwaahịa ikpeazụ. Usoro nkedo anwụ na-amanye igwe a wụrụ awụ ka ọ bụrụ ihe na-eji nnukwu nrụgide ma ọ na-achọ ihe ebu nwere nkọwa zuru oke iji mezuo ọrụ ahụ.
Mkpa nke Nhazi Ebu
Nhazi ebu na-emetụta ọdịdị, nhazi, ịdịmma na ịdị n'otu nke ngwaahịa emepụtara site na usoro nkedo anwụ. Nkọwa na-ezighị ezi nwere ike ime ka ngwá ọrụ ma ọ bụ ihe na-emebi emebi, yana àgwà ngwaahịa dị ala, ebe nhazi dị irè nwere ike imeziwanye arụmọrụ na oge mmepụta.
Ihe na-enye aka n'ichepụta ịkpụzi dị mma Enwere ọtụtụ ihe imewe ihe a ga-atụle mgbe ị na-ekpebi nkọwapụta kwesịrị ekwesị maka ọrụ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị a gụnyere:
• Ahịrị nkewa
• Ndị isi
• Oghere na windo
• Ọkpụrụkpụ mgbidi
Draft bụ ogo nke enwere ike ịpịnye isi ihe ebu. Ọ dị mkpa ka e depụta ya nke ọma iji wepụ ihe nkedo ahụ n'ọnụ ọnwụ nke ọma, ma ebe ọ bụ na ihe a na-emepụta adịghị adịgide adịgide ma na-adịgasị iche dabere n'akụkụ akụkụ mgbidi ahụ, njirimara ndị dị ka ụdị alloy a wụrụ awụ eji, ọdịdị mgbidi, na omimi nke ihe akpụ akpụ. nwere ike imetụta usoro ahụ. Geometry ebu nwekwara ike imetụta nhazi. N'ozuzu, oghere ndị a na-adịghị emetụ n'ahụ chọrọ ntanye, n'ihi ihe ize ndụ nke ịda mbà n'obi. N'otu aka ahụ, mgbidi dị n'ime nwekwara ike ịdalata, ya mere ọ chọrọ ka e dee ya karịa mgbidi dị n'èzí.
A fillet bụ ihe mgbagwoju anya nke a na-eji eme ka elu dị n'akụkụ dị nro. Nkuku dị nkọ nwere ike igbochi usoro nkedo ahụ, ya mere, ọtụtụ ihe ọkpụkpụ nwere fillets iji mepụta akụkụ gburugburu ma belata ihe ize ndụ nke mmejọ mmepụta. Ewezuga ahịrị nkewa, enwere ike ịgbakwunye fillet ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla na ebu.
Ahịrị nkewa, ma ọ bụ nkewa n'elu, na-ejikọ akụkụ dị iche iche nke ebu ọnụ. Ọ bụrụ na edobere ahịrị nkewa ahụ nke ọma ma ọ bụ bụrụ nke nwere nkwarụ site na nsogbu ọrụ, ihe nwere ike si na oghere dị n'etiti iberibe ebu, na-eduga n'ịkpụzi na-abụghị nke otu na ịkwanye oke.
Ndị isi bụ mkpịsị ihe nkedo anwụ anwụ nke na-eje ozi dị ka ebe mgbago ma ọ bụ ihe kwụpụrụ n'ichepụta ebu. Ndị na-emepụta ihe na-etinyekarị oghere n'ime ime ụlọ nke onye isi iji hụ na ọkpụrụkpụ mgbidi edo edo na ngwaahịa a kpụrụ akpụ. Metal na-enwekarị ike imeju ndị isi miri emi, yabụ ndochi na ribbing nwere ike ịdị mkpa iji belata nsogbu a.
Enwere ike iji ọgịrịga nkedo anwụ wee kwalite ike ihe na ngwaahịa na-enweghị oke mgbidi achọrọ maka ngwa ụfọdụ. Nhọrọ nke ọgịrịga nwere ike ibelata ohere nke mgbawa nrụgide na ọkpụrụkpụ na-abụghị otu. Ọ bakwara uru maka ibelata ibu ngwaahịa na imeziwanye ike njuju.
Oghere na windo
Gụnyere oghere ma ọ bụ mpio n'ime ihe nkedo anwụ anwụ na-emetụta ọ dị mfe ịwepụ ịkpụzi emechara ma na-enyere aka ịmepụta nnukwu ihe. Atụmatụ ndị agbakwunyere, dị ka nfebigara ókè, ihe ọkụ ọkụ, na ndị na-enyefe obe nwere ike ịdị mkpa iji gbochie nkedo achọghị n'ime oghere ma ọ bụ ihe adịghị mma na-aga n'akụkụ oghere.
Ndị na-emepụta ihe na-agụnyekarị aha ika ma ọ bụ akara ngwaahịa na nhazi nke ngwaahịa nkedo anwụ. Ọ bụ ezie na akara anaghị eme ka usoro nkedo anwụ dị mgbagwoju anya, ojiji ha nwere ike imetụta ụgwọ nrụpụta. Karịsịa, akara ngosi ma ọ bụ akara ewelitere chọrọ olu ọla a wụrụ awụ maka akụkụ ọ bụla arụpụtara. N'aka nke ọzọ, akara nkwụghachi azụ chọrọ obere akụrụngwa ma nwee ike ibelata mmefu.
Nke gara aga: Akụkọ ihe mere eme nke ịnwụ anwụ.